Top 6 Izitimela Zokulala EYurophu Kwezokuhamba | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Top 6 Izitimela Zokulala EYurophu Kwezokuhamba
Ingabe wake wazibuza ukuthi kunjani ukuba jamela, uwakhiphe woke, ngaphandle namafasitela amakhulu isithombe njengoba Whirls izwe? Kunjani kokuba lasenza nokulala nge ukuzamazamisa okusimeme isitimela njengoba trundles phansi ithrekhi? Izincwajana zemininingwane travel kuyindlela ejwayelekile yokuhamba kulo lonke elaseYurophu, futhi mhlawumbe enye yezindlela ezingcono kakhulu yokwenza kanjalo iwukuba nge isitimela olele. Lezi izitimela, okuyinto ngokuvamile zithatha ucime yezokuvakasha ntambama ubusuku bonke, nikeza okuhlangenwe nakho okuhluke kakhulu kunokwejwayelekile isipiliyoni sohambo lwesitimela. Sithole waqoqa engcono olele izitimela eYurophu ngawe. Kusukela Italy eFrance, Nazi izitimela zethu eziyisithupha eziphezulu zasebusuku zaseYurophu.
Izincwajana zemininingwane Ezokuthutha Is The nokunobungane Way Izikhangibavakashi. Lesi sihloko kulotshiwe sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Hamba nge- Londoloza Isitimela, I Eshibhe zemininingwane Amathikithi Iwebhusayithi In The World.
Top olele zemininingwane 1: Milan To Palermo
Uma wake waphupha ukuthi uzoba nemaphandleni ase-Italy, lokhu isitimela olele ingenye yezindlela ezingcono kakhulu ukwenza kanjalo. Nakuba uhambo ngesitimela kuthatha amahora angama-20 ukuqala kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni, isitimela siqondile futhi kukhona ezihlukahlukene okukhethwa kukho olele apholile. Amathikithi ayatholakala futhi nge Thello, osebenza amathikithi aya eVenice futhi.
Uma ufuna ukulondoloza imali, ungakhetha i-couchette yabantu abane, okuyinto imisebenzi njengohlobo oluthile mini olele inketho. Nokho, uma ufuna ukuthola ezinye sína livaleke-iso, ungaphuma ukuhlukanisa ezintathu umuntu gumbi nabangani – ngisho nabantu ongabazi, kanye ithikithi izobiza ngaphansi 50 euro. Yilokho ishibhile ziyethusa! Uma ufuna ukuba isimo Deluxe ngaphezulu, ungase futhi ukubambela olele olulodwa ngaphansi euro ayisishiyagalombili. Ngenkathi ngeke asithole en suite izindawo, uzokwazi ukujabulela ukulala ngokuthula ngentengo ephansi.
Lolu hambo ubona swath enkulukazi Italy, njengoba kuthatha wena kusuka Milan yonke indlela kuze kufike esihlokweni selinye ukuqalisa wezwe. Endleleni, uzothola izindawo zokushanela zasogwini namagquma aseTuscany. Lokhu, kunjalo, ngaphezu kwezithombe ezibunjiwe zaseRoma nomlando wazo.
Top olele zemininingwane 2: I-Zurich To Hamburg
Pick wesibili engcono olele isitimela e-Europe nguye ebalekela Zurich, Switzerland eHamburg, Germany. Uma ufuna insiza yesitimela sokulala, ungafuna cabanga Nightjet. Nakuba kukhona izinketho engami amaningi etholakalayo kulolu isitimela kukhona, ungase uthande ukucabangela uya nge umzila ekunikeza eshintsha. Emaphandleni kuyinto enhle, nesitimela sidabula phakathi amadolobhana amaningi endleleni, kuhlanganise nasedolobheni Hanover. Lezi amadolobha yako iwufanele stop ohambweni lwakho uma une isikhathi. Ungakhohlwa ukubuka indawo ekhangayo kwama-Alps uzokwazi ukuzwa noma.
Kungcono kakhulu, uma uke wenza indlela yakho Hamburg uku ibangana Berlin. Inhloko-dolobha yaseJalimane yamanje yaziwa ngama-nightclub ayo nokuzinikezela kwayo ngokuphelele kusiko le-hipster. Jabulela ubuciko basemgwaqweni nekhofi enhle ngenkathi uzindla ngezinsalela ezihlotshisiwe zoDonga lwaseBerlin.
Top olele zemininingwane 3: IBrussels EVienna
I Brussels eVienna European olele isitimela umzila ethandwa yokuxhuma Belgium Austria. Kuya ngesitimela osikhethayo, ligijimela ngasikhathi sinye kusukela ntambama futhi lifika ekuseni kakhulu, futhi kungamahora ayishumi nane’ isikhathi sokuvakasha. Lokhu kulula kakhulu esiswini kuka, ukusho, amahora angama-20 adingekayo ngesitimela sasebusuku ukusuka eMilan ukuya emzileni wePalermo.
Nge isamba okunjalo esifushane ngoba ujantshi travel, ngeke kudingeke ukuba icabange overlong ngesikhathi imoto yokudlela, yize ungakwazi ukujabulela izinsizakalo ezinikezwa amakilasi ahlukene.
Uma useVienna ungakwenza uhlangabezana nesiko lekhofi langempela, njengoba iVienna isisungule ngokwayo isizinda sekofi yaseYurophu.
Top olele zemininingwane 4: ILondon E-Edinburgh
Lokhu umzila abadumile siphela izikhathi eziyisithupha ngesonto. Abizwa nangokuthi ama-Caledonian olele, le sevisi yokulala ixuba ukunethezeka nokonga izindleko. Ungathola amadili ezifaka ukudla, iziphuzo, futhi yebo, amakhabethe okulala.
Uma ufuna ukuvakashela London phakathi kohambo lwakho, ungahlala ukhetha ukuthatha Eurostar kusukela izwekazi laseYurophu. Lena engabizi futhi elula yokwenza uhambo yonkana isiteshi usuke eFrance wenziwe eNgilandi. Amathikithi ayatholakala kusukela kwezinye izindawo, njengeAmsterdam.
Uma ufuna ngesizathu ukukhetha kulo mzila, khumbula ukuthi i-Edinburgh ikhaya likaHarry Potter, ukudalwa odumile wase-JK Rowling. Ungathola futhi indlela yokuya ezindaweni eziphakeme, ezifana Fort William, salokho okwenzeka Scottish eyiqiniso. Kuyasisebenzela!
Ukuphathwa ahloniphekile 5: I-Paris To Munich
Ngenkathi lolu hambo lobuchwepheshe alifaneleki njengendlela yokulala yesitimela, ngoba akubandakanyi ingalali ebhentshini elingaphansi ngokugcwele, isebenza imizila eminingana nsuku zonke.
Kunjalo, Paris lingumuzi izibani futhi elinye lamadolobha iningi romantic emhlabeni, ngakho-ke kufanele ngokuphelele lokushaya endaweni eholidini yakho European. Lokhu kuyiqiniso kungakhathaliseki ukuthi kungcono Ekuvakasheni kwakho kokuqala noma wokuhamba yakho.
Khonamanjalo, Munich iyikhaya Oktoberfest. Lo mkhosi kwenzeka ukuba omunye izintandokazi yami sonke isikhathi – kungcono umcimbi nabayiziminzi izinkulungwane. Nezinkulungwane ababekhona ngonyaka futhi plethora imisebenzi ongakhetha kuwo, IMunich ilifanele indawo ohlwini lwakho.
Ukuphathwa ahloniphekile 6: Copenhagen To Berlin
Lena enye Ukukhuluma ohloniphekile ngenxa nonstandard olele isitimela isipiliyoni, kodwa kusifanele isikhathi ngoba uzithola unqamula ezinye zezindawo ezinhle kakhulu eYurophu. Denmark ukuxuba eziyingqayizivele ithonya zaseScandinavia futhi ezwekazini isiko European futhi akumelwe lingabi nawo. I-umzila ibuye iqale eduze kakhulu Malmö, okuyinto idolobha elihle ukuvakasha futhi lesithathu ngobukhulu eSweden.
Nakuba ungeke uthole ingalali berths eziphelele ngale isitimela, uzothola umzila wobusuku obukhona nsuku zonke. Lezi kuzokuvumela ukushiya ebusuku futhi ufika ekuseni ngiqabuleke ngoba usuku ukuza. Ukuze uthole isipiliyoni esihamba nodwendwe non-olele, uzofuna ukubekisa ithikithi lesigaba sokuqala. Lezi amathikithi ngokuvamile ihambisane ozitholayo anda ezifana wemithwalo esengeziwe, ukudla kuhlanganisiwe, kanye nolwazi lwami lwangasese olwengeziwe.
Lapho uhamba kulo lonke I-Europe ngesitimela udliwe ngokuphelele ukuba uzikhethele. Noma ngabe eScotland noma Spain, Norway, noma Sweden, olele izitimela ezinye izinkonzo best azungeze sokufika ngakusasa beqabulekile futhi isilungele usuku lwakho ukuza. Nakuba une plethora ezikhona kuwe, njengehhotela lesitimela noma izitimela ezalala ubusuku bonke ezitimela ezinde zasePrague, Poland, Lisbon, noma ngisho naseMoscow, zisize umusa hit lezi izitimela eziyisithupha eziphezulu olele eYurophu esikhundleni. Ngeke sorry!
Ukuhamba ebusuku futhi ukubhuka Izitimela Zakho Zokulala nazo Londoloza Isitimela!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “Top 6 Izitimela Zokulala EYurophu Kwezokuhamba” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit nge isixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsleeper-trains-europe%2F%3Flang%3Dzu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Ngo isixhumanisi esilandelayo, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- lokhu kuxhumana ukuze IsiZulu imizila amakhasi okufikela, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, futhi ungangena esikhundleni sezilimi noma ngezilimi eziningi ozikhethayo.
#ubusuku I-EuropeTraveling I-NightTrains UkulalaTrains Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi